Umgubho eJerusalem uphelezelwe umbhikisho onodlame - Bayede News
Umgubho eJerusalem uphelezelwe umbhikisho onodlame
Ababhikishi basePalestine bajikijele amatshe kanti amaphoyisa akwa-Israel wona aphindisela ngokudubula amaStun Grenades nezinhlamvu zenjoloba ezingxabanweni ngaphandle kwesonto lamaSulumane i-al-Aqsa eJerusalem ngoMsombuluko ngesikhathi i-Israel igubha usuku lokukhunjulwa kokunqoba kwawo ezinye izingxenye zedolobha empini yama-Arab nama-Israel yango-1967.
Inhlangano iRed Crescent Society yasePalestine ithe bangaphezu kwe-180 abantu basePalestine abalimele kulolu dlame, okuthi kuleso sibalo abangama-80, okuhlanganisa nomuntu oyedwa osesimeni esibucayi, badluliselwa ezibhedlela. I-Al-Aqsa, indawo yesithathu engcwele kunazo zonke yamaSulumane, ibiyisizinda sodlame eJerusalema kuyo yonke inyanga engcwele yamaSulumane iRamadan. Lezi zingxabano zivuse ukukhathazeka emhlabeni jikelele.
Isimo besishubile ikakhulukazi njengoba i-Israel ibibhalwe ukuthi “Jerusalem Day”, umgubho wayo waminyaka yonke wokunqoba kwayo impumalanga yeJerusalema kanye neDolobha Elidala elibiyelwe lapho kuhlala khona izindawo ezingcwele zamaSulumane, ezamaJuda nezamaKhrestu.
Emzamweni wokudambisa lesi simo, amaphoyisa akwa-Israyeli athe avimbele amaqembu amaJuda ukuthi ahambele iJerusalem Day endaweni engcwele i-al-Aqsa, futhi amaJuda ayihloniphayo njengendawo yamathempeli amaJuda.
Amaphoyisa abecabanga nokuthi ashintshe indlela ezohanjwa uma sekumasha amaJuda ngaphansi kohlelo lweJerusalem Day lapho izinkulungwane zentsha yamaJuda esuke indizisa amafulegi abo phezulu idlula eSangweni Lasedolobheni Elidala laseDamasko naseMuslim Quarter.
Amaphoyisa adubule isisi esikhalisa unyembezi, amaStun Grenade kanye nezinhlamvu zenjoloba kubantu basePalestine abangamakhulu abebewajikijela ngamatshe e-al-Aqsa’s Plaza-strewn Plaza, kusho ofakazi kuleya ndawo .
“Abantu basePalestine abanenkani bahlele kusenesikhathi ukuthi baqhubeke nodlame eThempelini,” kusho u-Ofir Gendelman, okhulumela uNdunankulu uBenjamin Netanyahu. “Lokho esikubonayo manje kuwumphumela walokho.”
Amaphoyisa athe abeke izinkulungwane zamaphoyisa emigwaqeni yaseJerusalema nasophahleni ukuze kugcinwe ukuthula.
I-Israel ibuka yonke iJerusalema njengenhlokodolobha yalo, kuhlanganisa nengxenye esempumalanga eyayikhishiwe esinyathelweni esingazange sihlonishwe umhlaba wonke. AmaPalestine afuna impumalanga Jerusalem ukuba kube inhlokodolobha yezwe abalifunayo eWest Bank naseGaza.
Ukushuba kwesimo kubuye kwabhebhethekiswa ukukhishwa okuhleliwe kwemindeni eminingi yasePalestine endaweni yaseSheikh Jarrah empumalanga yeJerusalema.
Ummeli-jikelele wakwa-Israel uthole ukuhlehliswa kwaloluhlelo geSonto ngaphambi kokulalelwa kwalo eNkantolo ePhakeme ngoMsombuluko ecaleni eselidonse isikhathi eside lokususwa kwabantu ebelisabisa ngokuqinisa ukubhebhethekisa udlame.
Inkantolo ephansi ivune isimangalo sabahlali abangamaJuda ezweni lapho amakhaya asePalestine atholakala khona, isinqumo esabonwa ngabantu basePalestine njengesicelo sabakwa-Israyeli sokubaxosha eJerusalema okwakuphikiswana ngayo. Umeluleki wezokuPhepha kuzwelonke wase-US uJake Sullivan uzwakalise “ukukhathazeka okukhulu” ngesimo esiseJerusalema.